Abenzi beSaddle Fusion abavelisi, abaXhasi - China Isaddle Fusion Machine Umatshini
Isali Fusion Machine-SDM1200
Isicelo kunye neNqaku elifanelekileyo ukulungelelanisa i-PE yokunciphisa i-tee kwiworkshop. Umsebenzi odibeneyo we-welding kunye nokuthinta kwenza ukuba kugqitywe yonke inkqubo yokuqamba. ► Umatshini wokufudumeza oshushu we-PTFE. ►hlula amaxesha amabini eerekhodi zamaxesha kwindawo zokufaka kunye nokupholisa. ► Imitha yoxinzelelo oluchanekileyo lwedijithali ibonisa ukufundwa okucacileyo. Iindlela zesikhokelo somgama zixhotyiswe ngeplate yokufudumeza kunye nokutsala ipleyiti. ►ulawulo lwe-PLC olufumanekayo ngenkqubo ezenzekelayo ukuqinisekisa nge-welding st ...
Isali Fusion Machine-SDM630
Isali Fusion Machine-SDM315